DataNumen: Ndị otu nzukọ mba dị iche iche
Home Ndị òtù nke International Organisations
Ndị òtù nke International Organisations
DataNumen na-etinye uche dị ukwuu na mgbanwe mba na imekọ ihe ọnụ. O nwere otutu ndi otu na nmekorita ya na ndi otu mba na ndi ozo. Anyị na-enwe mmekọrịta chiri anya na ụlọ ọrụ edepụtara ebe a, mana DataNumen na-arụkwa ọrụ n'ọtụtụ usoro ndị ọzọ na mmekọrịta na mpaghara nke ngwanrọ, mmekọrịta ọha na eze, mmekọrịta gburugburu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Software na Industrylọ Ọrụ Mmezi Ozi
The Software & Information Industry Association bụ otu n'ime most mkpakọrịta azụmahịa dị mkpa maka ngwanrọ na ụlọ ọrụ ọdịnaya dijitalụ. SIIA na-enye ọrụ zuru ụwa ọnụ na mmekọrịta gọọmentị, mmepe azụmaahịa, agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ yana nchekwa akụ ọgụgụ isi nye ụlọ ọrụ ndị isi.
Tù Ndị Na-ere Ngwanrọ Onwe Ha
Organizationtù Ndị Na-ere Ihe Ngwanrọ Onwe Ha (OISV) bụ ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ nke ndị mmepe ngwanrọ, ndị na-ere ahịa, ndị na-ekesa ya, na ndị na-ere ahịa na-ejikọta echiche ha na echiche ha iji mepụta ngwanrọ na omume ka mma maka mmadụ niile. OISV dabere na ụkpụrụ nha anya, ochichi onye kwuo uche ya, ịkwụwa aka ọtọ, ịdị n'otu na inyere ndị ọzọ aka imezu ebumnuche ha.
Ndị ọkachamara n’ichepụta sọftụwia
Ndị ọkachamara na ngwanrọ nke sọftụwia bụ otu n'ime ndị otu kachasị ukwuu n'ụwa na-anọchite anya ndị otu ụlọ ọrụ ngwanrọ, yana ndị 2400 nọ na mba 93.
Tù Ndị Ọkachamara Ndị Ọrụ Nweta Software
AISIP bụ mkpakọrịta ọkachamara maka ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ngwanrọ nọọrọ onwe ha. Most Ndị otu AISIP na-ere ngwanrọ na ọrụ sitere na weebụsaịtị ha, ma na-agbasi mbọ ike ịnye ngwaahịa bara uru, bara uru ma mepụta ego.
Agụụ Software Agụmakwụkwọ
ESC (Educational Software Cooperative) bụ ụlọ ọrụ na-enweghị uru na-eweta ndị mmepe, ndị mbipụta akwụkwọ, ndị nkesa na ndị ọrụ sọftụwia agụmakwụkwọ.
Professionaltù Na-ahụ Maka Data Data International
IPDRA (International Professional Data Recovery Association) guzobere iji nyere ndị otu na ndị nwere l akaost data site n'itinye ha aka iru ulo oru Data Recovery nke ulo oru ruru eru.